epoxy insulator APG ညှပ် စက် ဘို့ ထုတ်လုပ်သူများ ကိုးကား - Jiangshan ဟွာအာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
epoxy insulator APG ညှပ် စက် ဘို့ ထုတ်လုပ်သူများ ကိုးကား
epoxy ဗဓေလသစ်အလိုအလျှောက်ဖိအားဂျယ်လ်ဟိုက်ဒရောလစ် apg ပုံသွင်းစက်အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ပလပ်နှင့်ချုံပုတ်များထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းသည် Standard APG စက်မှကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးမှအမျိုးမျိုးသောစက်များအထိဖြစ်သည်။
Vacuum epoxy resin apg သည်အလိုအလျောက်ညှပ်စက်နှင့်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောစက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိရိယာများကိုပြည့်စုံစေသည်။
APG - အမြင့်ဆုံးညှပ်gelရိယာအကျယ် ၁၂၀၀ x ၁၂၀၀ မီလီမီတာရှိသောအလိုအလျောက်ဖိအား gelation စက်ဖိအား gelation စက်များ
resin epoxy insulator တွင်လည်း apg clamping machine ထုတ်လုပ်မှုကိုကွန်ပျူတာစနစ်များမှထိန်းချုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးပုံမှန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများနှင့်နည်းပညာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သည်။
ခေတ်မီသောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သတ်မှတ်ထားသောကုန်ကြမ်းများဖြစ်သော epoxy ဗဓေလသစ်ဖိအားဂျယ်လ်ပုံသွင်းစက်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများအတွက်အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးသွင်းသူများသည်တင်းကျပ်သောစံနှုန်းများနှင့်အညီရွေးချယ်ထားခြင်းခံရပြီးပုံမှန်စာရင်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။
Epoxy insulator တွင်ရှိသော Transformer နည်းပညာအတွက်အလိုအလျောက်ဖိအား Gelation လုပ်ငန်းစဉ်ညှပ်စက်ဖြစ်သည်။
- ပရီမီယံ epoxy ဗဓေလသစ် APG အလိုအလျောက် epoxy ဗဓေလသစ်ဟိုက်ဒရောလစ်ညှပ်စက်၊ ခိုင်မာစေသူနှင့်ဆီလီကွန်အမှုန့်၊ လုံလောက်သော ၃ မြန်နှုန်းရောစပ်ခြင်းနှင့်ဖုန်စုပ်ခြင်း၊ ပူဖောင်းများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း
- တိကျသောမှိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလုပ်သမားများသည်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာလိုအပ်ချက်အားအချိန်ကုန်စေပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစေခြင်းကိုတင်းကြပ်စွာဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
1. မှိုပြားပေါ်တွင်မှိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အပူမှို, သော့ခတ်မှို, 60Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမှိုအပူ, ပွင့်လင်းမှို, ဖြီးမှိုလွှတ်ပေးရန်အေးဂျင့်, အနီးကပ်မှို, အပူချိန်အထိ145-150Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။
2. ကြိုတင်ရောစပ်ထားသောဒြပ်ပေါင်း (ဗဓေလသစ်၊ ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးသောအရာ၊ ခြယ်ပစ္စည်းနှင့်လင်းကျောက်)
၃။ ရောနှောထားသောဒြပ်ပေါင်းများကိုမှိုထဲသို့သွင်းပါ၊ အနီးရှိ APG စက်ဖြင့်ရောစပ်။ တွန်းပါ။ အိုးကိုမှရောနှောခြင်းမှပိုက်ကိုချိတ်ပါ။
4. Cost ဖြန့်ဖြူးပါ၊ ပွင့်လင်းသောမှိုမတိုင်မီလေကိုလွှတ်လိုက်ပါ။
Epoxy Insulators APG Clamping စက်၏အင်္ဂါရပ် -
APG epoxy ဒြပ်ပေါင်းများထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာပစ္စည်းများကိုအဓိကအင်ဂျင်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဘူတာ၊
ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ရောစပ်စက်။ ၎င်းသည်ထရန်စဖော်မာ၊ လျှပ်ကာ၊ သေတ္တာများနှင့်အခြား epoxy ဗဓေလသစ်ထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုသည်။
စက်လည်ပတ်ရန်အတွက် ၁-၂ လုပ်သား ၁-၂ ယောက်သာလိုသည်
ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်အရည်အသွေး၊ မျက်နှာပြင်အနိမ့်ဆုံး epoxy ဒြပ်ပေါင်းများကိုလေပူဖောင်းမပါဘဲထုတ်လုပ်ခြင်း
တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်နည်းပညာသင်တန်းများအတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် ၂၃ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်
insulator ချမှတ်ခြင်း စက် နှင့်အတူ ကြွေထည် ကိုးကား စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူများ
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်း ဘို့ တပ်ဆင် စားပွဲတင် ၏ မြင့်သည် ဗို့အား transဘို့mer သတ္တုများ မှို